Buyisela Outlook Express Idatha evela ku-Temporary Amafayela
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Outlook Express Repair Buyisela Outlook Express Idatha evela ku-Temporary Amafayela
Nini Outlook Express ihlanganisa ifayela le-.dbx, izokwakha i-temporary .dbt ngaphansi kwefolda efanayo nefayela le-.dbx. Isibonelo, uma uyi-compact Inbox.dbx file, ke itemporary kuzoba yi-Inbox.dbt.
Lapho iphutha livela ngesikhathi sokusebenza okuhlanganisiwe futhi ungasakwazi ukufinyelela ifolda yakho yeposi, futhi awusakwazi ukuthola idatha efunwayo kusuka kufayela le-.dbx, lapho-ke kusenokwenzeka ukubuyisa idatha yakho kusuka kuthempelirary .dbt, kanjena:
Thola ifolda lapho kugcinwa khona ifayela le-.dbx.
Bheka ukuthi kukhona yini i-temporary .dbt ngaphansi kwefolda efanayo.
Uma kunjalo, bese uyiqamba kabusha uye kwelinye ifayela elinesandiso sefayela le-.dbx, ngokwesibonelo, uma ifayela le-.dbt libizwa nge-Inbox.dbt, lapho-ke ungaliqamba kabusha ngokuthi i-InboxTemp.dbx.
Sebenzisa DataNumen Outlook Express Repair ukuskena ifayela le-InboxTemp.dbx bese uthola ama-imeyili kulo.
DataNumen PDF Repair 3.0 ikhishwe ngoMeyi 4, 2021